နှဥေီးတျောလှနျရေး နှငျ့ အတူ ကမ်ဘာကွီး ကို လှမျးမိုးသှား တဲ့ မွနျမာ့ G – XYZ ဟီး ရိုး မြား – Let Pan Daily
နှဥေီးတျောလှနျရေး နှငျ့ အတူ ကမ်ဘာကွီး ကို လှမျးမိုးသှား တဲ့ မွနျမာ့ G – XYZ ဟီး ရိုး မြား
အရငျတုနျးက ဆို မွနျမာ လို့ Google မှာ ရှာ လိုကျရငျ ဘငျတှေ အကွောငျး ဘဲ ‌ထငျး ကနဲပျေါလာပွီး ကမ်ဘာ့နိုငျငံ အသီးသီးက ဘငျပွဿနာနဲ့ပဲ တှဲနား လညျတဲ့ အနအေထားပေါ့။ ဘငျတှကေ ကမ်ဘာကွီးရဲ့ သနားမှုကို မကျြရညျနဲ့ ခြူ သှား ခဲ့တယျ။သနားခွငျးဆိုတာ ရညျရှညျတညျဆောကျ လို့ မဖွဈနိုငျတော့ အမွဲ Update လုပျနရေတယျ။ ခုဆို ပွညျပ က လူတှတေောငျ မနေ့ကွေပွီ။ ဒါပမေယျ့ ခု မွနျမာပွညျရဲ့ G-Z တှေ က တကမ်ဘာ လုံးက G-Z တှေ ကို အကောငျးဆုံး လှုံ့ဆျော နိုငျခဲ့ တယျ။
တခွားနိုငျငံက G-Z တှေ XY တှေ ပါ အံ့ဩ အားကြ သှားကွတယျ။ မွနျမာပွညျက ဆန်ဒပွ ပှဲတှကေ သူတို့ အတှကျ ကှီးရား ဇတျလမျးတှဲ ထကျ ပို ဆှဲဆောငျ နိုငျစှမျး ရှိနတေယျ။ တဈလကြျော အကွာအထိ တောငျ့ခံနိုငျစှမျးရှိတဲ့ မွနျမာ့ သပိတျကို လညျး လကျဖြားခါ ခြီးကြူးကွတယျ။ ဆန်ဒပွသူတိုငျး လကျမောငျးမှာ ဖုနျးနံပါတျ၊သှေးအမြိုးအစား ရေးထား ပွီး အသခေံ ဆန်ဒ ပွနတော ကမ်ဘာ့သမိုငျး၊ ကမ်ဘာ့ လူငယျတှရေဲ့ သမိုငျး မှာ အရမျး ဆနျးသဈတဲ့ အမွငျကို ဖွဈစတေယျ။ အခုဆိုရငျ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအသီးသီးက Gen.XY နဲ့ Z တှကေ သူတို့ မနကျ မိုးလငျးတာနဲ့ သူတို့ ဖုနျးတှေ ထဲက တှဈတှေ ပှတျကွတယျ။ သူတို့ စိတျထဲ အဲ့တာက အောကျဖဲခပျြကိုပှတျပွီး တဖွေးဖွေးကွညျ့ရတာထကျ ပွငျးထနျတဲ့ ခံစားခကျြကို ဖွဈစတေယျ။
မွနျမာပွညျမှာ ဒီနေ့ ဆန်ဒ ပွ မှ ပွနိုငျသေး ရဲ့ လား ? စဈတပျက ရကျစကျလှနျးလို့ အရှုံးပေး လိုကျပွီလား ? ဒီနရေ့ော စဈတပျဖွိုခှငျး မှုကို ဘယျလို အကွမျးမဖကျ တဲ့ နညျးနဲ့ ရငျဆိုငျကွ သလဲ ? စဈတပျရဲ့ အကွမျးဖကျမှု ကွောငျ့ ဘယျလောကျ သခေဲ့ လညျး ? စတဲ့ တထိတျထိတျစိတျတှေ နဲ့ ဖုနျးကို ပှတျပွီး။သူတို့ ရဲ့ တနတေ့ာကို မကျြနှာသဈ တဲ့ ဓလေ့ ဖွဈလာ နပေါပွီ။ သူတို့ ဓလလေို့ဖွဈလာတော့ TV တှကေလညျး မွနျမာအကွောငျး တနေ့ သုံးခါ လောကျတငျပေး လာကွပါတယျ။ မနကေ့ဆို CNN လိုကမ်ဘာကြျောသတငျးဌာနကွီးက ခဏ ခဏတောငျတငျနသေေး တယျ။ ပြောချင်တာက အကယျ၍သာ မွနျမာပွညျသားတယောကျ ပွညျပမှာ ရှိနပေါရငျ၊ သူဟာ မွနျမာတယောကျလို့ ဘေးက လူတယောကျယောကျက သိသှားပါရငျ သူ့ရဲ့လကျကို လာဆှဲ၊နူတျဆကျကွပါလိမျ့မယျ။
ပွီးရငျ ၊ဒီနရေ့ော မွနျမာပွညျက လူတှေ တောငျ့ခံနိုငျတုနျးဘဲလား မေး လိမျ့မယျ။ တောငျ့ခံနိုငျတယျလို့ ဖွခေဲ့ရငျ အဲ့အတှကျ သူဂုဏျယူပါကွောငျး၊ မွနျမာပွညျသူတှနေဲ့ ထပျတူရှိပါကွောငျး ပွောကွားပါလိမျ့မယျ။ ခု သဆေုံးသူတှေ၊အဖမျးခံရသူတှေ၊ဒဏျရာ ရသူတှေ၊ ဆကျလကျတိုကျပှဲ ဝငျနသေူတှေ အားလုံးကို ဦးညှတျ ဂုဏျပွုပါရစေ။ ခု ခငျဗြားတို့ ဟာ မွနျမာပွညျရဲ့ ကွယျ အဆငျ့ မဟုတျတော့ပါဘူး။ ကမ်ဘာ့ လူငယျ လူကွီးတှေ ရဲ့ ကွယျတှေ ဖွဈနပေါပွီ။ သူတို့တှေ အတှကျ၊ဘယျတော့မှ အရှုံးမပေးတဲ့ အထငျကွီးလေးစားအားကလြောကျတဲ့ *ဟီးရိုးလိုဂို* ဖွဈနပေါပွီ။ ‌ဆကျလကျပွီး တောငျ့ထားကွပါ။ ကဆြုံးမှု မရှိပဲရှငျသနျကွပါ။ အရှုံးမရှိဘဲ အဆုံးအထိ ဆကျသှား ကွပါစို့။ အရေးတျောပုံအောငျရမညျ။
အရင်တုန်းက ဆို မြန်မာ လို့ Google မှာ ရှာ လိုက်ရင် ဘင်တွေ အကြောင်း ဘဲ ‌ထင်း ကနဲပေါ်လာပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးက ဘင်ပြဿနာနဲ့ပဲ တွဲနား လည်တဲ့ အနေအထားပေါ့။ ဘင်တွေက ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သနားမှုကို မျက်ရည်နဲ့ ချူ သွား ခဲ့တယ်။သနားခြင်းဆိုတာ ရည်ရှည်တည်ဆောက် လို့ မဖြစ်နိုင်တော့ အမြဲ Update လုပ်နေရတယ်။ ခုဆို ပြည်ပ က လူတွေတောင် မေ့နေကြပြီ။ ဒါပေမယ့် ခု မြန်မာပြည်ရဲ့ G-Z တွေ က တကမ္ဘာ လုံးက G-Z တွေ ကို အကောင်းဆုံး လှုံ့ဆော် နိုင်ခဲ့ တယ်။
တခြားနိုင်ငံက G-Z တွေ XY တွေ ပါ အံ့ဩ အားကျ သွားကြတယ်။ မြန်မာပြည်က ဆန္ဒပြ ပွဲတွေက သူတို့ အတွက် ကွီးရား ဇတ်လမ်းတွဲ ထက် ပို ဆွဲဆောင် နိုင်စွမ်း ရှိနေတယ်။ တစ်လကျော် အကြာအထိ တောင့်ခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မြန်မာ့ သပိတ်ကို လည်း လက်ဖျားခါ ချီးကျူးကြတယ်။ ဆန္ဒပြသူတိုင်း လက်မောင်းမှာ ဖုန်းနံပါတ်၊သွေးအမျိုးအစား ရေးထား ပြီး အသေခံ ဆန္ဒ ပြနေတာ ကမ္ဘာ့သမိုင်း၊ ကမ္ဘာ့ လူငယ်တွေရဲ့ သမိုင်း မှာ အရမ်း ဆန်းသစ်တဲ့ အမြင်ကို ဖြစ်စေတယ်။ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက Gen.XY နဲ့ Z တွေက သူတို့ မနက် မိုးလင်းတာနဲ့ သူတို့ ဖုန်းတွေ ထဲက တွစ်တွေ ပွတ်ကြတယ်။ သူတို့ စိတ်ထဲ အဲ့တာက အောက်ဖဲချပ်ကိုပွတ်ပြီး တဖြေးဖြေးကြည့်ရတာထက် ပြင်းထန်တဲ့ ခံစားချက်ကို ဖြစ်စေတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဒီနေ့ ဆန္ဒ ပြ မှ ပြနိုင်သေး ရဲ့ လား ? စစ်တပ်က ရက်စက်လွန်းလို့ အရှုံးပေး လိုက်ပြီလား ? ဒီနေ့ရော စစ်တပ်ဖြိုခွင်း မှုကို ဘယ်လို အကြမ်းမဖက် တဲ့ နည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြ သလဲ ? စစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်မှု ကြောင့် ဘယ်လောက် သေခဲ့ လည်း ? စတဲ့ တထိတ်ထိတ်စိတ်တွေ နဲ့ ဖုန်းကို ပွတ်ပြီး။သူတို့ ရဲ့ တနေ့တာကို မျက်နှာသစ် တဲ့ ဓလေ့ ဖြစ်လာ နေပါပြီ။ သူတို့ ဓလေ့လိုဖြစ်လာတော့ TV တွေကလည်း မြန်မာအကြောင်း တနေ့ သုံးခါ လောက်တင်ပေး လာကြပါတယ်။ မနေ့ကဆို CNN လိုကမ္ဘာကျော်သတင်းဌာနကြီးက ခဏ ခဏတောင်တင်နေသေး တယ်။ျေပာခ်င္တာက အကယ်၍သာ မြန်မာပြည်သားတယောက် ပြည်ပမှာ ရှိနေပါရင်၊ သူဟာ မြန်မာတယောက်လို့ ဘေးက လူတယောက်ယောက်က သိသွားပါရင် သူ့ရဲ့လက်ကို လာဆွဲ၊နူတ်ဆက်ကြပါလိမ့်မယ်။
ပြီးရင် ၊ဒီနေ့ရော မြန်မာပြည်က လူတွေ တောင့်ခံနိုင်တုန်းဘဲလား မေး လိမ့်မယ်။ တောင့်ခံနိုင်တယ်လို့ ဖြေခဲ့ရင် အဲ့အတွက် သူဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ ထပ်တူရှိပါကြောင်း ပြောကြားပါလိမ့်မယ်။ ခု သေဆုံးသူတွေ၊အဖမ်းခံရသူတွေ၊ဒဏ်ရာ ရသူတွေ၊ ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ဝင်နေသူတွေ အားလုံးကို ဦးညွှတ် ဂုဏ်ပြုပါရစေ။ ခု ခင်ဗျားတို့ ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကြယ် အဆင့် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ လူငယ် လူကြီးတွေ ရဲ့ ကြယ်တွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ သူတို့တွေ အတွက်၊ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးတဲ့ အထင်ကြီးလေးစားအားကျလောက်တဲ့ *ဟီးရိုးလိုဂို* ဖြစ်နေပါပြီ။ ‌ဆက်လက်ပြီး တောင့်ထားကြပါ။ ကျဆုံးမှု မရှိပဲရှင်သန်ကြပါ။ အရှုံးမရှိဘဲ အဆုံးအထိ ဆက်သွား ကြပါစို့။ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။